Sambava: Fitsidihan’i Kardinaly Désiré Tsarahazana
vendredi, 14 septembre 2018 22:25
Androany zoma 14 septambra, tamin’ny folo ora maraina, no nigadona teto amin’ny seranam-piaramanidina ny Kardinaly Tsarahazana Désiré izay notronoiny Arsevekan'Antsiranana Marc Ramaroson.
Tonga nitsena azy tamin’ny fahatongavany izao ny Filohan'ny Antenimieram-pirenena, sady Kandida ho Filoham-pirenena, Rakotomamonjy Jean Max, sy ny ministry ny fanabeazam-pirenena Horace Gatien, izay samy zanaky ny faritra SAVA avokoa.
Diabe namakivaky ny tanàna no nisantarana izany io maraina io, mialoha ny nanaovana fotoam-bavaka teny amin’ny St Thérèse Sambava.
’’Aoka tsy ho amintsika Kristianina no hisy ny fihatsarambelatsihy,f fa mahaiza mandray vahiny, aza manambony tena fa manetre-tena ka na dia ny fahavalo aza dia tiavo. Fa ny mifanohitra amin’ireo zavatra rehetra ireo ny mahatonga ny fankahalana, mahatonga ny haratsiana isan-karazany, ary mahatonga ny fisaraham-bazana. Ny mahatonga antsika sahirana dia ny tsy fiainana ny rariny sy ny hitsiny".
Rahampitso sabotsy 15 septambra 2018 maraina dia hihazo ny Kaominina Amboangibe, izay toerana nanamasinana azy ho pretra rahateo, ny Kardinaly Tsarahazana Désiré, ka any no hanaovany fijoroana vavolombelona araka ny nambara androany.
Enga anie hoy Kardinaly mba hitondra fahasoavana lehibe ho antsika tsirairay sy ny Faritra SAVA izao famangiana izao.